2022 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Traders အတွက် အကောင်းဆုံး Forex ဘောနပ်စ် 🥇Pros & Cons များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex ဘောနပ်စ်များ မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်သည်၊ နှင့် တစ်ခုတောင်းဆိုရန် သင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်များကို ရှာဖွေရန် စိတ်အားထက်သန်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို ဖတ်ရှုပါ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကုန်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံး Forex ဆု ၁၀ ခု.
သင်သည် Forex ပွဲစားဖြင့် 100% ကိုက်ညီသော အပ်ငွေဆုကြေးငွေကို တောင်းဆိုပါသည်။
Forex ပွဲစားသည် အမြင့်ဆုံးဘောနပ်စ်ပေါင် 1,000 ကိုခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်သင်ငွေသွင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
သင်၏ အပ်ငွေကို ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ပွဲစားမှ သင့်အကောင့်ကို နောက်ထပ် £1,000 ဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
သင်၏စတင်လက်ကျန်မှာ £2,000 ဖြစ်သည် - သင်သည် သင့်အကောင့်ကို £1,000 ဖြင့်သာ ရန်ပုံငွေထည့်ထားသော်လည်း၊
UK ပွဲစားအသစ်ဖြင့် £20 အပ်ငွေအပိုဆုကြေးငွေကို သင်တောင်းဆိုပါသည်။
သင်သည် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီး ဘောနပ်စ်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော သင်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုပါ။
သင်၏ ID ကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ Forex ကုန်သွယ် ထို့နောက် site သည် သင့်အကောင့်ကို £20 အပ်ငွေမရှိသောဘောနပ်စ်ဖြင့် credit ပေးလိမ့်မည်။
ထို့နောက် သင်၏ ဘောနပ်စ်ငွေများဖြင့် ချက်ခြင်း အရောင်းအဝယ် စတင်နိုင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဥပမာများသည် Forex ဘောနပ်စ်များ မည်မျှ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနိုင်သည်ကို သရုပ်ပြသော်လည်း၊ ဘောနပ်စ်များကို ရယူပြီးနောက် ငွေထုတ်ခြင်း၏ ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ပွဲစားများ ပုံမှန်အားဖြင့် ထည့်သွင်းသည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များစွာကို သင်သတိပြုမိရန် လိုအပ်သည်။
သင်၏ forex ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်ယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းတွင် အကြီးမားဆုံးအရာမှာ ကုန်သွယ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည် £500 အပ်နှံပြီး £250 ဘောနပ်စ်ကို ရရှိသည် - သင်၏စတင်လက်ကျန်ကို £750 သို့ ယူဆောင်သည်ဆိုကြပါစို့။ အကယ်၍ သင်သည် ထို £750 ကို forex ပွဲစားမှ ချက်ခြင်း သင့်ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ရုတ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါက၊ ၎င်းသည် ပလပ်ဖောင်းအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေးပုံစံတစ်ခု ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ပလပ်ဖောင်းသည် သင့်အား အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် ဘောနပ်စ်ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုစေလိုသည်။
သင့်တွင် အပိုဆုငွေများ £250 ရရှိပါသည်။
ပွဲစားသည် £1 အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်တိုင်းအတွက် £10,000 ကို ထုတ်ပေးပါမည်။
ပေါင် 10,000 x £250 = ပေါင် 2.5 သန်း။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် £2.5 အပြည့်ထုတ်ရန် စုစုပေါင်း £250 million ကုန်သွယ်မှု လိုအပ်ပြီး ဘောနပ်စ်တစ်ခုလုံးကို ထုတ်ယူလိုက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များသည် မခက်ခဲပါက၊ Forex ဘောနပ်စ်များ ပုံမှန်အားဖြင့် ပါရှိသည့် အချိန်ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘောနပ်စ်ငွေထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေရန်အတွက် ပလပ်ဖောင်းများမှအသုံးပြုသည့် အခြားသောနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ ပွဲစားများသည် သင့်အား ဘောနပ်စ်ငွေများကို ရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီ ရက် 30 ပေးပါမည်။
Forex ဘောနပ်စ်အများစုသည် အနည်းဆုံး အပ်ငွေပမာဏဖြင့် လာမည်ဖြစ်သည်။ ပရိုမိုးရှင်းများသည် အများအားဖြင့် ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအပိုဆုငွေပမာဏကိုသာ ဖော်ပြသောကြောင့် ၎င်းကိုရှာဖွေရန် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ရှာဖွေရန် လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက်- UK forex ပွဲစားအများအပြားတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်ဆောင်များရှိနေသဖြင့် ဘောနပ်စ်များကို US ဒေါ်လာဖြင့် ပြသလေ့ရှိသည်။ စိတ်မပူပါနှင့်၊ အပိုဆုငွေပမာဏသည် ပေါင်စတာလင် ($100 = £100) တူညီလိမ့်မည် သို့မဟုတ် ပွဲစားမှ သင့်အား GBP နှင့်ညီမျှသော ($100 = £77) ပေးပါမည်။
1. AVATrade –2x $200 Forex ကြိုဆိုရေး ဘောနပ်စ်များ (ဘောနပ်စ်ခွင့်ပြုချက်ကို စည်းမျဉ်းအရ ခွင့်ပြုသည်)
AVATrade ရှိအဖွဲ့သည် ယခု $20 အထိ ကြီးမားသော 10,000% forex ဘောနပ်စ်ကို ပေးဆောင်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် အမြင့်ဆုံးဆုကြေးခွဲဝေမှုကို ရယူရန် $50,000 ပေးသွင်းရပါမည်။ မှတ်သားထားပါ၊ ဘောနပ်စ်များရရှိရန် အနည်းဆုံး $100 ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပြီး ငွေစာရင်းမသွင်းမီ သင့်အကောင့်ကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်ယူခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရ၊ သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်သည့် 1 အကြိမ်တိုင်းအတွက် $0.1 ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Markets.com သည် UK forex space တွင် အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော ငွေကြေးအတွဲများကို အဓိက၊ အသေးအမွှားများနှင့် ထူးခြားဆန်းပြားမှုများတွင် ပိုင်းခြားထားခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ကုန်သွယ်မှုနယ်ပယ်သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ အကောင့်ဖွင့်ရုံဖြင့် £25 အပ်ငွေမရှိသောအပိုဆုကြေးကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အပိုဆုသည် ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး စိတ်ပူစရာအချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် အနည်းငယ်အွန်လိုင်း Forex အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသော မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများရှိပါက၊ Interactive Brokers referral program ကို အသုံးပြုရန် အဘယ်ကြောင့် မစဉ်းစားသင့်သနည်း။ အကောင့်ဖွင့်တဲ့ customer အသစ်တိုင်းအတွက် $200 ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုပြီးပါက၊ Forex ဘောနပ်စ်သည် အဘယ်အရာနှင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ပုံတို့ကို ယခုအချိန်တွင် ခိုင်မာစွာ နားလည်သဘောပေါက်ထားသင့်ပါသည်။ ပွဲစားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုက်ညီသောအပ်ငွေအပိုဆု သို့မဟုတ် အပ်ငွေအပိုဆုကြေးကို ပေးဆောင်ကြောင်းလည်း သင်သိပါလိမ့်မည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်သည် ဘောနပ်စ်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများကို အပြည့်အဝ သိရှိကြောင်း သေချာစေရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဤငွေထုတ်ခြင်းမပြုမီ သင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည့် ပမာဏပေါ်တွင် ဗဟိုပြုပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင်၊ Forex ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်ယူနိုင်သော ငွေသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားများသည် သင့်အား ဘောနပ်စ်ရန်ပုံငွေတွင် $10,000 ထုတ်ပေးရန် $1 တန်သောငွေကြေးကို ရောင်းဝယ်ရန် တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများကို သုံးပုံတစ်ပုံ ဘောနပ်စ်ဖြင့် မြှောက်လိုက်သောအခါ၊ သင်သည် စတာလင်ပေါင်တစ်သန်း အကြမ်းဖက်ဝါဒတွင် အလွန်လျင်မြန်စွာ ရောက်နေပါသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ ငွေရှာခြင်း၏အမြင်ဖြင့် Forex ဘောနပ်စ်ကိုတောင်းခံခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိပေ။ ယင်းအစား၊ သင်သည် လက်တွေ့ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်တွင် သင်၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကို လေ့ကျင့်ရန်နှင့် တိုးတက်စေရန်အတွက် ဘောနပ်စ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
စည်းမျဥ်းများနှင့် အခြေအနေများတွင်တွေ့ရသော အနိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်မှုသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မပြည့်မီမချင်း သင်သည် Forex ဘောနပ်စ်ကို ထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် $1 တိုင်းအတွက် ထုတ်ပေးထားသော ဘောနပ်စ်ရန်ပုံငွေများ၏ ပျမ်းမျှ $10,000 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။